फ्लेमिश पेन्टि।। फ्लेमिश चित्रकलाको टेक्निक। फ्लेमिश स्कूल अफ पेन्टि | | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
फ्लेमिश पेन्टि।। फ्लेमिश चित्रकलाको टेक्निक। फ्लेमिश स्कूल अफ पेन्टि।
शास्त्रीय कला, आधुनिक अवान्त-गार्डे आन्दोलनहरू भन्दा फरक, सधैं दर्शकहरूको मन जितेको छ। प्रारम्भिक डच कलाकारहरूको कामको सामना गर्ने जोसुकैसँग सब भन्दा स्पष्ट र धनी छापहरू बाँकी छ।
फ्लेमिश चित्रकला यथार्थवाद, र colors्गको दंगा र प्लटमा साकार भएकाहरूको विशालताद्वारा छुट्याइएको छ।
हाम्रो लेखमा, हामी केवल यस प्रवृत्तिको विशेषताहरूको बारेमा कुरा गर्दैनौं, तर लेखन प्रविधिको साथै अवधिका सबैभन्दा उल्लेखनीय प्रतिनिधिहरूसँग पनि परिचित हुनेछौं।
चित्रकलाको इतिहासले मानवजातिको सामाजिक र राजनीतिक जीवनमा भएका सबै परिवर्तनहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबिम्बित गर्दछ। त्यसोभए, हंसमुख र लापरवाह एन्टिक फ्रेस्को मध्ययुगको उदास र मृत प्लॉटहरू द्वारा प्रतिस्थापित गरियो।
बारोक ("विचित्र, ज्यादतीको प्रवण") पुरानो र बोरिंग डग्मासबाट प्रस्थान दर्शाउँछ। यो समयको सबै दैनिक मुड र सुविधाहरू समाहित गरियो।
कथानकको बिचमा, सम्पूर्ण बारोक शैली जस्तै एक व्यक्ति हो। तर छवि को चरित्र गहिरो, धनी, अधिक यथार्थवादी हुन्छ। साथै, पूर्ण नयाँ विधा देखा पर्दछ, जस्तै स्थिर जीवन, परिदृश्य, दैनिक दृश्यहरू।
आउनुहोस् हामी कसरी पश्‍चिमी यूरोपीयन शैलीहरू भन्दा फ्लेमिश पेन्टि। भिन्न छ।
फ्लेमिश वा डच पेन्टि??
जो लोग यूरोपीय कला मा रुचि, फ्लेमिश चित्रकारी को रूप मा एक चीज थाहा छ। यदि तपाईं ज्ञानकोशलाई हेर्नुभयो भने, हामी बुझ्दछौं कि फ्लेमिंग्स फ्लान्डरका बासिन्दाहरू हुन्, जुन फलस्वरूप आधुनिक बेल्जियम हो। तर जब यो अवधि को कलाकारहरु को लागी आउँछ, हामी देख्छौं कि उनीहरु मध्ये धेरै डचहरु छन्।
एक तार्किक प्रश्न उठ्छ: फ्लेमिश र डच चित्रकला बीच के भिन्नता छ? वास्तवमा, सबै कुरा एकदम सजिलो छ। सोह्रौं शताब्दीको अन्त्यमा, 1579 वर्षमा, नेदरल्याण्ड्सको उत्तरी प्रान्तहरूले स्पेनिश मुकुटको प्रभावबाट मुक्त गरे। अब हल्याण्ड यस क्षेत्र मा गठन गरिएको छ।
यो उल्लेखनीय छ कि युवा देशको संस्कृति प्रभावशाली गतिमा विकास गर्न थाल्छ। उनको सुनौलो युग लामो समयसम्म टिकेन, केवल एक शताब्दी। तर पीटर पल रुबेन्स, एन्टोन भ्यान डाइक, जेकब जोर्डिनेस र केही अन्य कलाकारहरू जस्ता कलाकारहरूको काम राष्ट्रिय डच कलाको मुख्य भाग बन्यो। पछि, अठारौं शताब्दीमा, फ्रान्सेली संस्कृतिले देशमा बलियो प्रभाव पार्न थाल्छ। त्यसकारण कुनै पनि पहिचानको कुरा गर्न सकिदैन।
सत्रौं शताब्दीका फ्लेमिश कलाकारहरूको अझै केही शैली सुविधाहरू छन् जुन उनीहरूलाई देशका अन्य भागहरूबाट डच मास्टरहरू भन्दा फरक पार्दछ।
सर्वप्रथम, तिनीहरूले इटालियनहरूका यथार्थपरक अभिप्रायहरूलाई स्पष्टसँग बुझे, जुन हामी पछि हेर्नेछौं। दोस्रो, भूखंडहरू देखा पर्दछन्, जसको केन्द्रमा पौराणिक वा धार्मिक दृश्यहरू होइनन्, तर साधारण नागरिकहरूको जीवनका दैनिक कथाहरू हुन्।
यसैले, यो पत्ता लाग्यो कि फ्लेमिश चित्रकला डच फाइन आर्टको विकासको प्रारम्भिक चरण हो। तर यस युगको मुख्य विशेषता भनेको राष्ट्रिय डच मोटिफ्स हो, विदेशी प्रभावले नराम्रो।
इटालियनहरूबाट धेरै तकनीकहरू लिएको छ, जुन पछि छलफल हुनेछ, मौलिक शैलीको निर्माणको लागि मात्र आधार बन्न पुग्यो, तर कुनै पनि हिसाबले उनीहरूको विश्व दृश्यमा निर्भर थिएन।
इटालियन मास्टरहरूको प्रभाव
हामी पछि हेर्नेछौं, सोह्रौं शताब्दीको फ्लेमिश र डच चित्रकला इटालियन कलाकारहरूले धेरै प्रभावित गर्दछ। टर्निंग पोइन्ट लूका लीडेन र एल्डरले पिटर ब्रुगेल पछि सुरु हुन्छ। पछिल्लालाई विशेष रूपमा चित्रकला र चरित्र छविहरूको प्लटका लागि समकालीनहरूले "किसान" भनेर चिनिन्थे।
तर नेदरल्याण्डको राजनीतिक नक्शामा आएको साना परिवर्तन पछि, पूरै नयाँ युग सुरु हुन्छ। फ्लेमिश चित्रकला, जुन एक अलग प्रवाहमा बाहिर उभिए, यसको गर्व जुलुस रुबेन्सको सुनहरा युगमा शुरू हुन्छ।
बोलोग्ना स्कूल, व्यवहारवाद, कारवागिजम - यी दिशाहरू इटालीबाट अन्य यूरोपीय राज्यहरूमा आउँदछन्। यो यस मोडमा छ जुन मध्यकालीन मानकहरूको अन्तिम अस्वीकृति हुन्छ। अब पुरातात्विक कथाको पौराणिक चरित्रहरूमा, डच जीवनको यथार्थपरक दृश्यहरू र अझै पनि शिकारको साथ जीवनले अझ बढी अधिक प्रभुत्व जमाउन थाल्छ।
फारामहरूको स्मारकत्व, विवरणको नजिक ध्यान, जीवन्त र जीवन्त चरित्रहरू, दैनिक दृश्यहरू, चुटकी हास्यको साथ सुगन्ध - यी केवल फ्लेमिश चित्रकलामा निहित चरित्र सुविधाहरूको अंश हुन्। उनी विशेष गरी उनको रंगीन प्रभावहरूको साथ सामान्य यूरोपीयन ललित कलाको पृष्ठभूमिमा बाहिर खडा हुन्छिन्।
डच मास्टरहरू चीरोस्कोरो टेक्निकसँग खेल्छन्, चहकिलो र colorsहरू र फराकिलो स्ट्रोकको साथ चित्रकलाहरू भरिपूर्ण छन्। तिनीहरू एक पटक क्यानोनिकल विषयवस्तु लिन्छन् र तिनीहरूलाई दैनिक विधामा विकास गर्दछ वा तिनीहरूलाई बर्ल्स्कमा पनि ल्याउँछ। उनीहरूका चरित्रहरू जीवित र सास फेर्छन्। हामी अझ धेरै मास्टरहरूको बारेमा जान्ने छौं। तपाईले देख्नुहुनेछ कि तिनीहरूको क्यान्भासहरूमा प्लटहरू कसरी भावपूर्ण छन्।
चित्रकलाको इतिहासले धेरै उदाहरणहरू जान्दछ जब समाजमा राजनीतिक र सामाजिक प्रकोपले कलाकारको युवा पुस्ताको रचनात्मकता र कार्य शैलीलाई प्रभावित गर्‍यो। तसर्थ, इटालियन मास्टरहरूको प्रभाव नेदरल्याण्ड्सको हावाको ताजा सास बने, जसले प्रति-सुधार प्रभावबाट भर्खरै स्वतन्त्र गर्यो।
अन्वेषकहरूका अनुसार फ्लेमिश पेन्टिंगको प्रविधि पहिलो पटक भ्यान आइक भाइहरूले विकास गरेका थिए। तर कला इतिहासकारहरू धेरै इटालियन मास्टरहरूले धेरै पहिले उस्तै विधाहरू प्रयोग गरेको कुरामा जोड दिन्छन्। च्याम्पियनशिपको उतार-चढावहरूमा नजाऔं, तर यो प्रविधिको बारेमा कुरा गरौं।
क्यानभास सुरुमा सेतो ग्लू प्राइमरले कभर गरिएको थियो। उनीसँग धेरै ध्यान दिएर उपचार गरिएको थियो किनभने उसको सेतोपन भविष्यको चित्रको सबैभन्दा हल्का छाया थियो। थप रूपमा, बाँकी पेन्टहरू धेरै पातलो तहहरूमा लागू गरिएको थियो, जसले माटोलाई भित्रबाट एक अपरिहार्य चमकको प्रभाव सिर्जना गर्न अनुमति दियो।
अन्य धेरै चित्रकला प्रविधिको जस्तै, फ्लेमिशसँग स्पष्ट कार्य एल्गोरिथ्म छ। सुरुमा, "कार्डबोर्ड" सिर्जना गरिएको थियो - भविष्य चित्रका लागि टेम्प्लेट। यो कुनै नराम्रो स्केच थियो, यसलाई तस्विरका बाहिरी रूपरेखाको लम्बाईसहित सुईले छेडियो। त्यस पछि, कोइला पाउडरको साथ, वर्कपीस ध्यानपूर्वक प्रिमिट शीटमा सारियो।
स्केच स्थानान्तरण गरेपछि र यसको सिमानाहरू कोरिए पछि, भविष्यको तस्वीर तेल वा टेमेराले अस्पष्ट बनायो। हल्का खैरो लेपको पातलो तहले ढाँचाको भित्री चमकलाई बचाउन सक्ने थियो।
त्यसो भए कामको "मृत रंगहरू" को चरण (चिसो र फिक्का टोनहरू जुन कुनै चासोको कारण छैन) आयो। र एक मास्टरपिसको सिर्जना चमकदार र धनी र .्गहरू प्रयोग गर्ने प्रक्रियाबाट पूर्ण भयो जुन अझै पनि साधारण पर्यटकहरू र शैक्षिक कला प्रेमीहरूलाई प्रभावित गर्दछ।
Caravagism को स्नातकोत्तर
१ 16 औं र १ 17 औं शताब्दीमा, फ्लेमिश स्कूल अफ पेन्टि युरोपियन कलाको विशेष शैलीबाट प्रभावित भएको थियो। Caravaggism इटालियाली मास्टर माइकल एंजेलो डे Caravaggio को विरासत हो। उनी रोममा बस्थे र युरोपको सबैभन्दा ठूलो बारोक मास्टर मध्ये एक थियो। आधुनिक विद्वानहरूले यस चित्रकारलाई चित्रकलामा यथार्थताको संस्थापक ठान्छन्।
उनले चीरोस्कोरो टेक्नो (प्रकाश-छाया) मा काम गरे, जहाँ तस्वीरको अँध्यारो क्षेत्र र प्रकाशको बिच फरक छ। यो उल्लेखनीय छ कि Caravaggio को एक स्केच फेला परेन। उनले तुरून्त कामको अन्तिम संस्करणमा काम गरे।
इटाली, स्पेन र नेदरल्याण्डमा 17 शताब्दीको चित्रकारीले ताजा हावाको सासको रूपमा नयाँ ट्रेन्ड लिएको छ। इटालियन डे फियोरी र जेन्टिलेस्ची, स्पिनियर्ड रिबेरा, डच कलाकारहरू टेरब्रुगेन र बार्बुरेनले यस्तै प्रविधिमा काम गरे।
साथै, क्याराभ्याजिज्मले पीटर पल रुबेंस, डिएगो भेलाक्ज, जर्जिस डे लाटोर र रेम्ब्रान्ड जस्ता मालिकहरूको सृजनात्मक चरणहरूमा पनि ठूलो प्रभाव पारेको थियो।
Karavagists को भारी क्यानभासहरु गहराई र विस्तार गर्न को ध्यान संग आश्चर्यचकित। यस प्रविधिको साथ काम गर्ने डच चित्रकारहरूको बारेमा कुरा गरौं।
पहिलो विचारहरू हेन्ड्रिक टेरब्रुगेनले अपनाए। XVII शताब्दीको सुरूमा उनले रोमको भ्रमण गरे, जहाँ उनले मानफ्रेडि, सारासेनी र अन्यजातिहरूलाई भेटे। यो टचले यस प्राविधिक प्रयोगबाट युट्रेक्ट चित्रकलाको आधारशिला राख्यो।
चित्रहरूका प्लटहरू यथार्थपरक छन्, ती चित्रण गरिएको दृश्यहरूका नरम हास्य द्वारा चित्रण गरिएका छन्। टेब्रुगेनले आफ्नो आधुनिक जीवनको व्यक्तिगत क्षणहरू मात्र देखाएनन्, साथै परम्परागत प्रकृतिवादमा पनि पुनर्विचार गरे।
होनर्थस्ट स्कूलको विकासमा अगाडि बढ्यो। उनी बाइबलीय कथाहरूतिर फर्किए, तर प्लाट XVII शताब्दीका डचहरूको दैनिक दृष्टिकोणबाट निर्माण गरिएको थियो। त्यसकारण, हामी उसका चित्रहरुमा चीरोस्कोरो टेक्निकको स्पष्ट प्रभाव देख्छौं। यो काराववादीहरूको प्रभावमा रहेको काम हो जसले उनलाई इटलीमा प्रख्यात तुल्यायो। मैनबत्तीको साथ आफ्नो शैली दृश्यहरु को लागी, उनले उपनाम "रात" प्राप्त गरे।
युट्रेक्ट स्कूल भन्दा फरक, रुबेन्स र भ्यान डाइक जस्ता फ्लेमिश चित्रकारहरू काराभ्याजिज्मका उत्कट समर्थक भएनन्। यो शैली तिनीहरूको शैलीमा व्यक्तिगत शैली को गठन मा एक अलग चरण को रूप मा दर्शाईन्छ।
एड्रियन ब्रोभर र डेभिड टेनिर्स
धेरै शताब्दीहरु को लागी, फ्लेमिश मास्टर को चित्रण मा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरीरहेको छ। हामी कलाकारहरूको हाम्रो समीक्षा पछिल्लो चरणबाट सुरू गर्नेछौं, जब स्मारक चित्रकलाबाट प्रस्थान गरिएको थियो साँघुरो लक्षित विषयहरूमा।
सुरुमा, ब्रुभेर र त्यसपछि टेनिअर्स यंगरले, साधारण डच व्यक्तिको दैनिक जीवनको दृश्यहरू सृजनात्मकताको केन्द्रमा राख्दछन्। त्यसोभए, एड्रियनले, पीटर ब्रुगेलको अभिप्रायलाई निरन्तरता दिइरहेका थिए, र उनले आफ्नो चित्रकलाको लेख्ने कला र फोकसमा केही परिवर्तन गरे।
ऊ जीवनको सबैभन्दा कुरूप पक्षमा केन्द्रित छ। उसले धुवाँले भरिएको अँध्यारो खम्बा र टावरहरूमा क्यानभासहरूको लागि गुणहरू खोज्छ। यद्यपि, ब्राउजरका चित्रहरू तिनीहरूको अभिव्यक्ति र चरित्रको गहिराईमा उल्लेखनीय छन्। कलाकारले मुख्य पात्रहरूलाई गहिराइमा लुकाउँछ, अझै लाइफ हाइलाइट गर्दै।
पासा खेल वा कार्ड मा एक लडाई, एक निन्द्रा धूम्रपान गर्ने वा नाच्ने नशा। चित्रकारलाई चासो लाग्ने यी कथाहरू थिए।
तर पछि ब्रावरले गर्ने कामहरू नरम बन्छन्, तिनीहरूमा हँसिया पहिले नै विडंबना र बडबडमाथि व्याप्त छ। अब चित्रहरूमा दार्शनिक मुड छन् र प्यासी वर्णहरूको गति प्रतिबिम्बित गर्दछ।
अन्वेषकहरू भन्छन कि १th औं शताब्दीमा, फ्लेमिश कलाकारहरू विगतको पुस्ताको कारीगरको तुलनामा फिक्री गर्न थाल्छन्। यद्यपि हामी केवल रूबेन्सको पौराणिक कथानक र जोर्डेन्सको बुर्सेकको टेनिअर्स यंगको किसानहरूको शान्त जीवनको स्पष्ट अभिव्यक्तिबाट परिवर्तन देख्छौं।
पछि, विशेष गरी गाउँको बिदाको लापरवाह क्षणहरूमा केन्द्रित। उनले साधारण किसानहरूको विवाह तथा उत्सवहरू चित्रण गर्न खोजे। यस बाहेक, बाह्य विवरण र जीवनशैलीको आदर्शमा विशेष ध्यान दिइयो।
एन्टोन भ्यान डाइक जस्तै, जुन हामी पछि हेर्नेछौं, फ्रान्स स्नेइजडरहरूले हेन्ड्रिक भ्यान बालेनसँग प्रशिक्षण सुरु गरे। यसका अतिरिक्त, कान्छो पीटर ब्रुगेल पनि उनका गुरु थिए।
यस मास्टरका कामहरू जाँच गर्दा हामी सिर्जनशीलताको अर्को पक्षसँग परिचित हुन्छौं, जुन फ्लेमिश चित्रकलामा अत्यन्त धनी छ। स्नीइजेडरका चित्रहरू पूर्णकालिन उसका समकालीनहरूको चित्रकला भन्दा फरक छन्। फ्रान्सले आफ्नो कोठा पत्ता लगाउन र यसमा एक असुरक्षित मालिकको उचाइमा विकास गर्न सफल भयो।
उहाँ अझै जीवित र जनावरहरूको छविमा उत्कृष्ट बन्नुभयो। जनावर चित्रकारको हैसियतमा उसलाई अरू चित्रकारहरू, विशेष गरी रुबेन्सले आफ्नो उत्कृष्ट कृतिहरूको केही अंशहरू बनाउन आमन्त्रित गर्थे।
Snyders को काम मा, त्यहाँ शुरुआती वर्षहरु मा पछाडि अवधिमा शिकार दृश्यहरु लाई क्रमशः संक्रमण देखि क्रमिक संक्रमण छ। व्यक्तित्वको चित्र र चित्रणका लागि सबै मन नपराउने बावजुद, तिनीहरू अझै पनि उनको क्यान्भासेसमा छन्। उनी कसरी परिस्थितिबाट मुक्त भए?
यो सरल छ, फ्रान्सले शिकारी जेन्सेनस, जोर्डनेन्स र मास्टरहरूको समाजका अन्य परिचितहरूको छविहरू सिर्जना गर्न आमन्त्रित गर्यो।
यसैले हामी देख्छौं कि फ्ल्याण्डर्समा 17 शताब्दीको चित्रणले अघिल्ला प्रविधि र दृश्यहरूबाट संक्रमणको विषेश चरण प्रतिबिम्बित गर्दछ। यो इटालीमा जस्तो सहजै भएन, तर फ्लेमिश मास्टरहरूको संसारलाई पूर्ण रूपले असामान्य सृष्टि प्रदान गर्‍यो।
17 शताब्दीको फ्लेमिश चित्रकारी अघिल्लो अवधिको तुलनामा बढी स्वतन्त्रता द्वारा चित्रण गरिएको छ। यहाँ तपाईं जीवनबाट प्रत्यक्ष दृश्यहरू मात्र देख्न सक्नुहुनेछ, तर हाँसोको सुरुवात पनि। विशेष गरी, याकूब जोर्डेन्स प्रायः आफूलाई आफ्नो क्यान्भेशमा बर्लस्कको एउटा टुक्रा ल्याउन अनुमति दिन्थे।
आफ्नो काममा, उनी चित्रकार चित्रकारको रूपमा महत्वपूर्ण उचाइमा पुगेनन्, तर यसको बाबजुद पनि, उनी चित्रको चरित्र व्यक्त गर्नमा झन्डै उत्कृष्ट भए। त्यसो भए यसको एक मुख्य श्रृंखला - "बिन राजाको चाड" - लोक कथा, लोककथा, चुटकुले र भनाइहरूको दृष्टान्तमा निर्मित छ। यी क्यानभासेसहरूले १ Dutch औं शताब्दीको डच समाजको भीड, हंसमुख र हडबड जीवनको चित्रण गर्दछ।
यस कालखण्डको चित्रकलाको डच कलाको बारेमा बोल्दा हामी प्रायः पीटर पल रुबन्सको नाम उल्लेख गर्दछौं। यो उनको प्रभाव थियो जुन धेरै फ्लेमिश कलाकारहरूको कार्यहरूमा प्रतिबिम्बित हुन्छ।
जोर्डनेन्स पनि यस भाग्यबाट उम्कन सकेनन्। उनले केही समय रुबन्सको कार्यशालामा काम गरे, चित्रका लागि स्केचहरू बनाए। यद्यपि याकूबको लागि टेनेब्रिसम र चीयरोस्कोरो बनाउने राम्रो भयो।
यदि तपाईंले जोर्डनेन्सका उत्कृष्ट कृतिहरूलाई नियालेर हेर्नुभयो भने, तिनीहरूलाई पीटर पौलको कामसँग तुलना गर्नुहोस्, हामी पछिको स्पष्ट प्रभाव देख्नेछौं। तर याकूबका चित्रहरू तातो र colors्ग, स्वतन्त्रता र कोमलताद्वारा छुट्याइएको छ।
फ्लेमिश पेन्टि ofका मास्टरपिसहरूको बारेमा छलफल गर्दै कसैले रुबेन्सको उल्लेख गर्न सक्दैन। पीटर पल आफ्नो जीवनकालमा मान्यता प्राप्त मालिक थिए। उनलाई धार्मिक र पौराणिक विषयवस्तुको मानिन्थ्यो, तर कलाकारले परिदृश्य र चित्रको प्रविधिमा कम प्रतिभा देखाएनन्।
उहाँ त्यस्तो परिवारमा हुर्कनुभयो जुन आफ्नो जवानीमा आफ्ना बुवाको चालका कारण बदनाम भयो। अविभावकको मृत्युको लगत्तै पछि तिनीहरूको प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित हुन्छ र रुबेन्स र उनकी आमा आन्ट्वर्पमा फर्कन्छन्।
यहाँ, एक जवान व्यक्तिले चाँडै आवश्यक जडानहरू प्राप्त गर्दछ, ऊ काउन्टेस डि लेलेनको पृष्ठ बनेको छ। थप रूपमा, पीटर पलले टोबियस, भेर्च्ट, भ्यान नूरटलाई भेट्छन्। तर ओट्टो भ्यान Veen मा एक संरक्षक को रूप मा उनको मा एक विशेष प्रभाव थियो। यो कलाकारले भविष्यका मालिकको शैली आकार दिन निर्णायकको भूमिका खेलेको थियो।
ओटो पुरातन लेखक, पौराणिक कथालाई मन पराउँथे, होरेसको रचनालाई चित्रण गर्थे, र इटालेली नवजागरण विशेषज्ञको विशेषज्ञ र सहयोगी पनि थिए। भ्यान भियरले यी व्यक्तित्वका लक्षणहरू एक युवा कलाकारलाई सुनाए।
ओट्टो रुबेन्ससँग चार वर्षसम्म इंटर्नशिप गरेपछि, ती कलाकारहरू, उत्कीर्णकर्ता र मूर्तिकारहरूको वर्कशप एसोसिएशनमा "गिल्ड अफ सेन्ट ल्यूक" को नाममा स्वीकृत छन्। तालिमको अन्त्य, डच मास्टरहरूको लामो परम्परा अनुसार इटालीको यात्रा थियो। त्यहाँ पिटर पल यस युगको उत्कृष्ट कृतिहरूको अध्ययन र प्रतिलिपिमा संलग्न थिए।
अचम्म मान्नु पर्दैन, फ्लेमिश कलाकारहरूको चित्रहरू उनीहरूका सुविधाहरूमा केही इटालियन रेनेस्सान मालिकहरूको तरिकासँग मेल खान्छ।
इटालीमा, रुबेन्स बस्ने र प्रख्यात परोपकारी र कलेक्टर भिन्सेन्जो गोन्जागा अन्तर्गत काम गर्थे। अन्वेषकहरूले उनको काम मन्टुआलाई भने किनभने यो शहरमा संरक्षक पीटर पिटरको घर थियो।
तर प्रान्तीय स्थान र यसलाई प्रयोग गर्ने गोन्जागको चाहना रुबेन्सलाई मन परेन। चिठीमा, उनी लेख्छन् कि भिसेन्जोले पोर्ट्रेट चित्रकारहरूको सेवा उही सफलताको साथ प्रयोग गर्न सक्दछन्। दुई वर्ष पछि, त्यो युवक रोममा संरक्षक र अर्डरहरू भेट्टाउँछ।
रोमन कालको मुख्य उपलब्धी भलिसेलामा सान्ता मारियाको चित्रकला र फेर्मोमा गुम्बाको वेदी थियो।
आफ्नो आमाको मृत्यु पछि रुबेन्स एन्ट्वर्पमा फर्कन्छन्, जहाँ ऊ चाँडै नै सबैभन्दा धेरै तलब पाउने मालिक हुन्छ। ब्रसेल्स अदालतमा उनले पाएको तलबले उनलाई ठूलो जीवनशैली, ठूलो वर्कशप र धेरै प्रशिक्षुहरूको लागि अनुमति दियो।
यसका साथै, पीटर पलले अर्डरसँग सम्बन्ध कायम राखे जेसूट्सजो बाल्यावस्थामा हुर्केका थिए। तिनीहरूबाट उनले सेन्ट चार्ल्स बोरोमीको एन्ट्वर्प चर्चको भित्री सजावटको लागि अर्डरहरू प्राप्त गर्दछन्। यहाँ ऊ सब भन्दा राम्रो विद्यार्थी - एन्टोन भ्यान डाइक द्वारा सहयोगी छ, जसको बारेमा हामी पछि कुरा गर्ने छौं।
रुबेन्सले आफ्नो जीवनको दोस्रो आधा भाग कूटनीतिक अभियानहरूमा बिताए। आफ्नो मृत्यु हुनुभन्दा केही समयअघि उसले एउटा जागीर किने, जहाँ एउटा गधाले परिदृश्य देखायो र किसानहरूको जीवन चित्रण गर्यो।
यस महान् मालिकको काममा टिटियन र ब्रुघेलको प्रभाव विशेष गरी पत्ता लगाइन्छ। सब भन्दा प्रख्यात कार्यहरू क्यान्भासेसहरू “शिमशोन र डेलीला”, “हिप्पो हन्टि,”, “ल्युसीपसको छोरीहरूको अपहरण” हो।
रुबेन्सको पश्चिमी यूरोपियन चित्रकलामा यति जोडदार प्रभाव थियो कि एक्सएनयूएमएक्समा, एन्ट्वर्पको ग्रीन स्क्वायरमा उनलाई एउटा स्मारक निर्माण गरियो।
एन्टोन भ्यान डाईक
अदालतको चित्रकार, चित्रकलामा पौराणिक र धार्मिक विषयहरूका प्राध्यापक, बारोक कलाकार - यी सबै पीटर पॉल रुबेन्सका सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी एन्टोन भ्यान डाइकको विशेषता हुन्।
यस मालिकको चित्रकला प्रविधिको प्रशिक्षण हेन्ड्रिक भ्यान बालेनसँग प्रशिक्षणको क्रममा बनाइएको थियो जसलाई उनलाई सिकारुको रूपमा पठाइएको थियो। यस चित्रकारको कार्यशालामा वर्षौं बित्यो जसले एन्टोनलाई चाँडो स्थानीय ख्याति कमायो।
चौध वर्षमा, उनले पहिलो कृति लेखे, पन्ध्र मा उसले आफ्नो पहिलो कार्यशाला खोले। त्यसोभए कान्छो उमेरमा भ्यान डाइक एन्ट्वर्प सेलिब्रेटी बन्छ।
सत्रौं वर्षमा एन्टोनलाई सेन्ट ल्यूकको गिल्डमा भर्ना गरियो जहाँ उनी रुबेन्सको साथ सिकारु बन्छन्। दुई वर्ष (1918 बाट 1920 सम्म), भ्यान डाइकले तेह्र बोर्डहरूमा येशू ख्रीष्ट र बाह्र प्रेरितहरूको चित्रहरू रंग्यो। आज, यी कार्यहरू धेरै विश्व संग्रहालयहरूमा भण्डार गरिएका छन्।
एन्टोन भ्यान डाइकले चित्रण गर्ने कला धार्मिक विषयहरूमा बढी केन्द्रित थियो। उनले रूबन्सको कार्यशालामा "प्रसिद्ध मुकुटसहित" र "एक चुम्बन जुडा" लेखेका थिए।
1621 वर्ष बाट, यात्रा अवधि सुरु हुन्छ। पहिले, यो जवान कलाकार राजा याकूबको मुनि लन्डनमा काम गर्दछ, र त्यसपछि इटाली जान्छ। एक्सएनयूएमएक्समा, एन्टोन लन्डन फर्किए, जहाँ चार्ल्स मैले उनलाई नाइट गर्दै थिए र उनलाई अदालत पेंटरको स्थान दियो। यहाँ उसले आफ्नो मृत्यु सम्म काम गर्यो।
उनका चित्रहरू म्यूनिख, भियना, लुभ्रे, वाशिंगटन, न्यू योर्क र विश्वका अन्य धेरै हलहरूमा संग्रहालयहरूमा प्रदर्शन हुन्छन्।
यसैले, आज हामी प्रिय पाठकहरु, फ्लेमिश चित्रकलाको बारेमा जान्यौं। तपाइँलाई यसको गठनको इतिहास र चित्रहरू सिर्जना गर्ने प्राविधिक बारेमा विचार प्राप्त भयो। थप रूपमा, हामीले यस अवधिमा सबैभन्दा ठूलो डच मास्टरहरूसँग संक्षिप्त भेट्यौं।
पोस्ट कला र मनोरञ्जन
21 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,483 प्रश्नहरू।